Soomaaliya oo Warqad digniin ah u dirtay Qaramada Midoobey iyo Beesha Caalamka | Xaysimo
Home War Soomaaliya oo Warqad digniin ah u dirtay Qaramada Midoobey iyo Beesha Caalamka
Soomaaliya oo Warqad digniin ah u dirtay Qaramada Midoobey iyo Beesha Caalamka
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo warqad ka hadlaysa Arrimaha Doorashoooyinka u qortay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobey, qoraalka ayaa wuxuu u dhignaa sidan;
Annaga oo tixraacayna warsaxafadeedkii soo baxay 31 March 2021 ee ka soo baxay Madaxweynaha xilka ka dagaya ee Golaha Amanka Marwa Linda Thomas, dowladda Soomaaliya waxay tixgalin iyo qadarin u haysa kaalinta Golaha Amaanka iyo taageerada waqtiga dheer ee xubnaha golaha la garab taagnaayeen Horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya iyo xushmadda gobonimada Soomaaliya, sharafka dhuleed, midnimadeeda iyo madax banaanideeda siyaasadeed.
B: Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay u arkaysaa faragalin kasta oo hannaanka doorashooyinka qaranka ku sameeyaan xubna dibadda ah in ay tahay faragelinta toos ah oo lagu sameeyay arrimaheena gudaha iyo jabin la jabiyay shuruucda Golaha Amniga iyo qaanuunka Caalamiga ah.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyada oo ka faa’iidaysanaysa fursadaan waxa qiraysa doorka iyo qiimaha golaha Amaanka ee Qaramada midoobey waxayna siinaysa tixgalin midda ugu saraysa.
Akhriso Qoraalkii oo English ah: